Iphupha malunga neRadish Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
I-Radishes - iibhubhu ezincinci ezibomvu ezinazo zonke. Isongo sabo esomeleleyo siqhelekile, esenza ukuba bathandwe kakhulu njenge-snack phakathi kokutya, njengecala kwiisaladi okanye njenge-snack. Qaphela: ukuvuseleleka kweeradishes, kokukhona kuya kusiba nzulu spiciness yabo.
Bangama-95 eepesenti amanzi, kodwa basajongwa njengeebhithamini eziyinyani. Kuba ukongeza kwi-sodium, i-magnesium, i-potassium, i-calcium kunye ne-iron, iivithamini A, B1, B2, B6, C no-E ziyafumaneka kumaqhuqhuva amancinci. I-Radishes nayo inefuthe elihle kwiibhaktheriya. Ioyile yemastadi equlethweyo ibanika ubungqongqo babo kwaye inesifo esichasene neentsholongwane kunye nesibulala zintsholongwane, ngakumbi kwithumbu lesisu.
Ngokuqinisekileyo iRadishes yinto yokunambitha; Emva kwayo yonke loo nto, ayinguye wonke umntu onokuthanda yonke into ekutyeni. Nangona kunjalo, iincasa zethu zokungcamla zinokuba nefuthe kwinto eyenzeka ebusuku kwilizwe lethu lamaphupha. Ukuba ngoku siphupha i-radishes, sinokuthi sizithande izinto ngokukodwa iziqholo ...
1 Uphawu lwephupha «Radish» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Radish» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «radishes» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Radish» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso wephupha elithi "Radish" umele u umcimbi oshushu. Nangona kunjalo, oku kusekho phantsi kophuhliso. Ngokuqinisekileyo okwangoku ayicacanga ncam kumaphupha apho ukudibana okuthile kunokuya khona. Nangona kunjalo, inkuthazo sele iqaphelekile ngokucacileyo kwaye iphupha leradish lifuna ukukubonisa ngokuqinisekileyo.
Kwakhona, umbono weeradishes kwi el mundo yamaphupha nawo angabakho uphawu lwesilumkiso unayo. Abayi kuba nako ukugcina iimfihlo ekwabelwana ngazo ngokholo olulungileyo kunye nomhlobo. Ke ngoko, kwikamva elingekude, kufuneka ulumke ngakumbi malunga nokuba ngubani othetha izinto ezinokuqhushumba ezingacwangciswanga kubantu besithathu. Ukubona i-radishes ephupheni kukwamema abo baphuphayo ukuba bathathe lonke ithuba Ukuzonwabisa sebenzisa. Isiselo kunye nabahlobo, ukuphuma okuzenzekelayo kunye nomntu omthandayo okanye ipikniki kweli lizwe - yenza nantoni na oyithandayo kwaye ubambe umzuzu nanini na ufumana ithuba.
Ukuba utya i-radishes kwimeko yephupha, kungekudala kuya kufuneka ube nomsindo ngenxa yokujongela phantsi kunye nokuhlwaya abanye.
Uphawu lwephupha «Radish» - Ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu uguqulela i-radish njengomfanekiso wephupha ukusuka kwimbono yengqondo, ifanekisela umnqweno womntu ophuphayo we-adventure ekhulayo. Ngokukodwa ukuba ungabuva ngokucacileyo ubukrakra besiraphu ephupheni, oku kunokuthetha ukuba iimfuno zesondo kunye nomnqweno wokuphila badlala indima ephambili kubomi balo mntu kuthethwa ngaye. Nangona kunjalo, ayisiyiyo inkanuko evulekileyo, kodwa ulangazelelo olucinezelweyo.
Ukuba wondla omnye umntu radishes ngexesha lokulala, unokuba neemvakalelo ezikhethekileyo kulo mntu, ezinokuthi zidibaniswe ne-eroticism kunye nomtsalane wesini.
Uphawu lwephupha «radishes» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni iphupha lokomoya, umfanekiso wephupha "radishes" uthetha Umama Umhlaba kwaye khumbula xa uphupha izinto ezinkulu zihlala zivela kwizinto ezincinci.